HORDHACA: Manchester City vs Swansea City – Gool FM
( Premier League ) 22 April 2018. Kooxda Manchester city oo xaqiijisay hanashada horyaalka Premier League ayaa garoonkeeda kusoo dhaweyn doonta naadiga heerka labaad ka carareysa ee Swansea city.
Pep Guardiola kooxda uu maamulo ayaa aad ugu rajo weyn in horyaalka ay ku qaadaan dhibcihii ugu badnaa ebid xili iminka ay lee yihiin 87 dhibcood waxaana kulamada horyaalka ka haray 3 kulan balse kooxda City ayaa heysta ciyaar baaqi ah.
Saacada: 06:30 pm xiliga geeska Africa
Garsooraha : Craig Pawson
Weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero ayaa seegi doona inta ka hartay kulamad xagaagan kadib markii uu maray qaliin yar oo dhanka jilibka ah.
Laacibka qadka dhexe ee Fernandinho ayaa ganaaxan ciyaartan, halka uu shaki ku jiro daafaca John Stones oo qaba xaalad adag oo gumaarkaa.
Kooxda Swansea City waxeey soo dhaweynayaan dib usoo laabashada qadkooda dhexe ee Sam Clucas kadib dhibaato jilibkaa, iyo Mike van der Hoorn oo la filayo inuu soo laabto kadib dhibaato garabka ah.
Luciano Narsingh ayaa ku maqan murgacasho anqawgaa, halka Renato Sanches uu kasoo kabanayo dhaawac muruqa ah.
Manchester City ayaa badisay 10 kamid ah 13-kii ciyaar ay kulamada horyaalka Premier league la kulantay kooxda Swansea, halka guuldaro ee soo gaartay waxey aheyd ciyaar dhacday bishii March ee sanadkii 2012.
City ayaa sido kale badisay 11-kii kulan ee u dambeysay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Swansea kulamada horyaalka tan iyo ciyaar 2-1 looga badiyay oo ka tirsaneed horyaalka labaad waxeyna dhacday sanadkii 1951.